Homeमनोरंजनलियोनेल मेसी बने विश्वको सबैभन्दा बढी कमाउने फुटबलर, कति कमाए त उनले ? थाहा पाउनुहोस्
September 15, 2020 admin मनोरंजन 196992
विश्वको सबैभ’न्दा बढी कमाउने फुटब’लर हुन् लियोनेल मेसी । उनलाइ नचिन्ने सायद कमै मात्रमा हाेलान् । तर, उनकाे चर्चा बि’श्वभर प्रसस्त रहेकाे छ ।
फोर्ब्सले जारी गरेको सर्बा’धिक कमाउने फुट’बलरको सुचीमा मेसीले आफ्ना सद’बहार प्रतिद्वन्दी क्रि’स्टियानो रोनाल्डोलाई उछिने’का हुन् । मेसीको कुल कमाई १२६ मिलियन अमेरिकी डलर रहेको छ ।
चर्चित फुटबलर मेसि’काे जसमा ९२ मिलि’यन डलर पारिश्रमिक रहेको छ भने विभिन्न ब्रान्डको प्रचार गरे बापत ३४ मिलियन डलर कमाएका छन् । त्यस्तै दोस्रो स्थान’मा रहेका क्रिस्टि’यानो रोनाल्डो’को कमाई ११७ मिलियन अमेरिकी डलर रहेको फोर्ब्स’ले उल्लेख गरेको छ ।
जसमा ७० मिलियन डलर पारिश्र’मिक रहेको छ भने ४७ मि’लियन डलर विभिन्न ब्रान्डको प्रचार गरे बापत कमा’एका छन् । फोर्ब्सको यस सूचिको तेस्रो स्थान’मा ब्राजि’लका नेइमार रहेका छन् ।
नेइमारले बा’र्षिक ९६ मिलियन डलर कमा’एका छन् । जसमा ७८ मिलियन डलर पारिश्रमिक रहेको छ भने १८ मिलियन डलर विभिन्न ब्रान्डको प्रचार गरेबाप’तको कमा’ई रहेको छ । यस्तै अरु फुटब’लरहरु पनि अघि बढ्दै छन् । – हिमालयन दैनिक
August 2, 2020 Administer Banner Post, मनोरंजन, रोचक 101885
April 8, 2021 admin मनोरंजन 77278
September 20, 2020 admin मनोरंजन, समाचार 226803
लियोनेल मेसी बने विश्वको सबैभन्दा बढी कमाउने फुटबलर, कति कमाए त उनले ? थाहा पाउनुहोस् (196992)